Ruian Vidi Trading Co, Ltd. Iyo iri muWenzhou Guta, Zhejiang Province. Yakanaka kutengeserana uye kutakura. Iyo kambani yakazvipira mukugadzira uye kutsvagisa nekusimudzira kwemishenjere yemarasha gore rese. Iva neruzivo rwakadzika uye vashandi veR & D. Unhu hunovimbiswa, hwakanakisa mhando uye mutengo unonzwisisika. DarkElves 'yakazvipira kupa vazhinji vashandisi vane inoshanda, yakachena uye inoshamwaridzika zvakatipoteredza yemhando yepamusoro yekupisa samba yemarasha.
Iyo kambani ine epamberi yekugadzira system uye manejimendi sisitimu, inogona kuburitsa huwandu hwakawanda hwesimbi yemarasha inosangana nemhando yacho munguva pfupi.
Tichapa huwandu hwakawanda hwemhando yepamusoro yeBBQ marasha pamutengo wakanakisa.
Isu tiri BBQ Bamboo Briquette Charcoal Vagadziri vakatengesa kune dzakasiyana nyika pasi.
Zvese zvigadzirwa zvemishenjere emarasha zvatinogadzira zvinosangana nemhando yepamusoro yekutengesa kunze.
Fekitori yedu iri muWenzhou Guta, Zhejiang Province, China.Pari nekukurumidza nyika nzira dzekufambisa uye iri padyo nechiteshi chengarava.
DarkElves inotarisa kugadzirwa kwemishenjere yemarasha zvigadzirwa. Nekuti iyo nzvimbo yemazimbe emarasha (700㎡ / g) yakakura kudarika yemarasha (300㎡ / g), iyo moto weRimaElves bamboo marasha inopfuura katatu nguva yemarasha, uye nguva yekupisa yakareba.
DarkElves inogona kuramba yakatsiga patembiricha yakakwira kwenguva yakareba, uye ine chikamu chemaminerari anodikanwa mukukura kwehupenyu, uye ichapinda mukati mechikafu panguva yebhayiko, iyo inobatsira muviri wemunhu.
1. DarkElves bamboo charcoal raw materials: DarkElves bamboo inokura 1/3 nekukurumidza kupfuura miti inokurumidza, uye inyanzvi inogadzikana inogona kugadziriswazve munguva pfupi.
2. Bamboo marasha chinhu chakasikwa chigadzirwa, chisina chepfu, hapana hwema, hapana mhedzisiro, uye ine yakanaka magetsi conduction.
3. Bamboo charcoal ine mashandisirwo ekushambadza uye kuora: bamboo charco pachayo ine yakawanda kabhoni pores kupfuura marasha, ayo anogona kunyatsotora zvinhu zvinoyangarara mumhepo.anogona kupinza, kuora uye kudzora mishonga inokuvadza senge sulfide, cyanide, methanol, benzene , nezvimwe.
Yedu yemarata yemarasha inogadzirwa kubva kune yakasikwa yemishenjere sawdust uye yakasiyana nemamwe marasha emarasha maitiro.
Iyo inogadzirwa nekutanga kumanikidza guruva remushenjere kuita raundi mativi pasi pekumanikidza uye wozoikochekesa mukati mekupisa kwakanyanya. Iyo yemhando yepamusoro, yakachena uye yakasikwa, isina makemikari anokuvadza, asiri-chepfu uye akakwana maBQQ.
Isu tinotsunga kuvimbisa: Darkelves Yese Bamboo Marasha zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva ku100% zvakasikwa Bamboo isina makemikari ekuwedzera kana anosunga.
Ndokumbira kuti utibate kuti uwane rumwe ruzivo chero nguva pane zvako zvaunoda, izvo zvinotipa kutarisa kwedu kwese.
● Inonyanya Kushanda ● Inochenesa ● Inowedzera Zvakatipoteredza